MACAAMIIL KALA-JAADJAAD AH
Ku-xirnaanta macaamiil dhaqan ahaan kala jaadjaad ah
Si loo hello macluumaadka WaterCare ee ku qoran luqadaha aan ka ahayn afka Ingiriiska, waxaad riixdaa midkaad rabto kuwa hoos ku qoran:
Giriik, Carabi, Kantoniis, Mandarin, Burmiis (5 lahjadood – Karen, Chin Hakha, Chin Falam, Zomi & Mizo), Fiyatnaamiis, Hindi, Assyrian, Dari, Nepali, Pershian, Somali, Sudanese Carabi, Turkish iyo Talyaani.
WIXII KU SAABSAN WATERCARE
Masuul ka noqo biilka biyahaaga
Ma u baahan tahay caawima la xiriirta bixinta biilka biyaha iyo bulaacada? WaterCare waxaa loo sameeyey inay kaa caawinto masuuliyad-qaadistaada.
Da’daalka Yarra Valley Water, WaterCare waxay bixisaa barnaamijyo kaalmo, dhabooyin iyo adeegyo si ay kuu caawimaan inaad maarayso biilasha bulaacada iyo biyaha – hadda iyo mustaqbilka.
Raadi barnaamijka kuugu haboon.
Yarra Valley Water, waanu fahamsan tahay in kor u qaadista biilasha tas-hiilaadka ay saamayn weyn ku yeellan karto dadka guriga degan. Sababtaas ayaana keentay in aan samayno WaterCare.
Waxay hal meel isugu keenaysaa dhamaan barnaamijyadayada kaalmada, si aad u hesho xalka ugu saxsan oo aad ku maarayn karto kantaroolida biilashaada biyaha.
Sahami barnaamijyadayada WaterCare ee u gaarka ah gurigaaga adigoo riixaya linkiska hoose. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto sida aan kuu caawimi karno.
Raadisay hababka hoos loogu dhigo saamaynta biilkaaga biyaha?
Xaq ma u leedahay lacag dhimista?
Ma raadin kartaa caawimada maaraynta biilashadaada biyaha?
Ingiriisku maaha afkaaga miyaa? Waxaad kaloo helli kartaa xalka ugu fiican luqada kala duwan.
Waxay kaa caawintaada inaad dusha joogto
Ma doonaysaa inaad ka dhigto biyahaaga iyo biilka bulaacada mid aad loo maarayn karo? Raadi xalka kuugu haboon:
Marabtaa in biilkaaga si awtomaatik ah loo bixiyo?
Ma doonaysaa in biilkaaga saddexdii bilood mar la bixiyo?
Ma doonaysaa inaad goosgoos u bixiso?
Ma ka qaadataa lacag Centrelink?
Waxaad kaloo booqan kartaa websaytka Yarra Valley Water.
Weli dhibaato ma qabtaa? La hadal kooxdaada
Kooxda Kaalmada Macmiilaheena ayaa diyaar u ah inay ku caawimaan. Waan fahmi karaa in qof walba noloshiisu isbedeli karto sida waafaqsan xaallada – taas oo mararka qaarkood keeni karta loolan dhaqaale. Na soo wac maanta telefoonka 1800 637 316 adigoo si gaara noola hadlaayaa.
Kaalmada habka bixinta
Ka goyn toos ah
Ilaali waqtiga iyo dhibta adiga oo si toos ah u bixinaya biilka, taas oo laga bixinayo akoontigaaga. Dooro saddexdii bilood mar ama goosgoos. Fadlan ogsoonow in lacag bixinta tooska ahi ay tahay waajib in lagu xiro bangi ama akoonti credit union. Lama aqbali karo kaararka deynta.
Dheeraynta mudada lacag bixinta
Dhibaatada lacag bixintu ma muddo gaabanbaa? Si sahlan u samayso Codsiga Kordinta mudada Lacagbixinta si aad dib ugu dhigto lacagbixintaada afar jeerlaha ah.
Si aad u codsato, diyaar ka dhig akoontigaaga nagana soona wac tel: 1300 362 332.
U qorshay lacag bixintaada si kugu haboon
SmoothPay waa lacag bixinta iyo habka qoodaynta Yarra Valley Water, taas oo kuu ogolaata inaad biilkaaga u bixiso labadii asbuuca ama bishiiba. Taas macneheedu waxa weeye waxaad bixin kartaa lacag bixin joogto ah oo yar sanadka gudahiisa, si hoos loogu dhigo saamaynta biilasha afarta jeer
ah ee kala qoondayntaada.
Ka dhigista biilka biyaha mid ilaashan
Waa dedgeg inaad saxiixdo SmoothPay sahlan oo lacag la’aana kuna dari mayso lacag siyaada ah
oo khidmad ah biil-sanadeed kaaga.
Si aad ugu dalbato, si sahlan:
La xiriir La-taliyaha Adeega Macmiilaha 1800 994 789
Dooro labadii asbuucba ama lacag bixinta bilaha ah
Dooro inaad ku bixiso ka goyn toos ah, credit card ama BPAY.
Si kasta ha ahaatee, xataa qoodaynta kharajka ee wanaagsani waxay ku keeni kartaa dhibaato biilasha afarta jeer ah – khaasatan marka dhowr is-ku mar lagaa rabo.
Ku beekhaami karaka dhimista
Ma haysataa kaarka hawlgabka ama dhimista? Waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay dhimista kharajka bulaacada iyo biyaha haddii aad sheegato meeshaad rasmi ahaan u degan tahay.
Taas macneheedu waxa weeye magaca iyo cinwaanka ku yaalla kaarka waa inuu ahaadaa
kan ku yaalla akoontiga.
Xaq-u-yeelashada kaarka waxaa ku jira:
Kaarka Dhimista Hawlgabka Centrelink
Kaarka Daryeelka Caafimaadka ee Centrelink
Kaarka Dhimista Hawlgabka ee Department of Veterans’ Affairs ama Kaarka Caafimaadka ee
Gold Repatriation ee dhamaan xaalladaha Department of Veterans’ Affairs.
Haddii aad xaq u leedahay, riix halkan si aad u xeraysa codsiga akoontigaaga Yarra Valley Water. Waxaad naga wici kartaa 1300 304 688, fadlan diyaari kaarkaaga.
Haddii aadan haysan kaarka, ka feker waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay, lana xiriir:
Department of Veteran's Affairs - Tel: 03 9284 6000
Kaydin noocee ah ayaan ka helli karaa kaarka dhimista?
Biyaha iyo bulaacadaha lacag dhimistooda waa .50 santi boqolkiiba biyaha iyo bulaacadaha sanadii ugu badnaan. 2019/20 waa $328.90.
Haddii laguu soo diro biil ah hal adeeg, tusaale ahaan, biyaha keliya, waxaad hellaysaa .50 santi boqolkiiba biyaha ugu badnaan $164.45.
Sida loo akhriyo biilka Bulaacada iyo Biyaha Gurigaaga
Xalalka caawimada lacag bixinta
Somali - Payment assistance options
Nadaamka dhibta-dhaqaale ee Yarra Valley Water
Somali - Hardship Policy
Xaashida xaqiiqda ee Choose Tap
Somali - Choose Tap fact sheet
Somali - Health poster
Jaartarka qolka qubayska
Somali - Bathroom chart
Sidee Lagu Baaraa Qubitaanka Biyaha
Somali - How to test for a leak
WA XOGAA TALOOYIN WAX KU OOL AH OO BIYAHA LOOO TASHIILO
Somali - Handy hints to save water